ह्याकर विकासको बयान : समस्या औंल्याईदिँदा अपराधी पो बनेछु - Vision Nepal TV
Published: May 27, 2016 | 11:36 am | शुक्रबार, जेष्ठ १४, २०७३ | १२३०६ पटक पढिएको
विकास पौडेल, विभिन्न सरकारी वेवसाइट ह्याक गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ परी २५ दिन हिरासतमा राखेर धरौटीमा छुटेका एक किशोर । गत चैत्र ७ गते पक्राउ परेका उनी बैशाख २ गते प्रहरी हिरासतबाट छुटेका थिए । नेपाल टेलिकमलगायत विभिन्न सरकारी निकायको वेवसाइट ह्याक गरेको अभियोगमा उनलाई साइबर अपराध अन्तर्गत मुद्धा चलाइएको छ । केहि दिन अगाडी सम्पन्न भएको परिक्षा दिएर हाल फुर्सदमा बसेका पौडेलसँग सुरज प्याकुरेलले गरेको कुराकानी :
भर्खर कक्षा ११ को परिक्षा सकियो । अहिले फुर्सदमा छु ।
परिक्षा कस्तो भयो ?
ठीकै भयो । परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा प्रहरी हिरासतमा थिएँ । पढ्न कुनै रोकावट नभएपनि दिमाग पढाइमा थिएन । पहिलो पटक प्रहरी हिरासतमा बसेको त्यहाँको वातावरण पढ्न सकिने खालको थिएन । कक्षा ११ को कम्प्युटर बिषयको प्राक्टिकल परिक्षा भने छुटेको छ । उक्त परिक्षाको दिन म प्रहरी चौकीमा थिएँ ।
तपाईंलाई प्रहरीले किन समातेको भन्ने थाहा छ ?
ठ्याक्कै के अभियोग भन्ने त थाहा छैन । तर वेवसाइटहरु ह्याक गरेको भनेर प्रहरीले समातेको भन्ने कुराचाहीं थाहा छ । नेपाल टेलिकमले गरेको उजुरीको आधारमा मलाई प्रहरीले समातेको भन्ने थाहा छ ।
प्रहरीले पक्रदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
बाबासँग किनमेलको लागि सुन्धारा गएको थिएँ । घर फर्किंदा पक्राउ परें ।
सुरुमा प्रहरीले के सोध्यो ?
मैले मेरो फेसबुक ग्रुपमा राखेको नेपाल टेलिकमको ह्याक भएका केहि फोन नम्बरहरुको सुची राखेको थिएँ । प्रहरी अंकलले ‘यो तिमीले गरेको हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले हो भनेर स्वीकारें । त्यसपछी मलाई त्यहाँबाट लगियो ।
विभिन्न वेवसाइटको ‘सेक्युरिटी’ निकै कमजोर छ भन्ने पत्ता लागेपछि मैले वेवसाइटको सेक्युरिटीबारे सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट पनि गरें । तर त्यसको जवाफ नआएपछि उनीहरुलाई त्यसको जानकारी दिन ह्याक गरेको हुँ ।
यसरी वेवसाइट ह्याक गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन ?
अपराध नै हो वा प्रहरीले पक्रन्छ भन्ने थाहा थिएन ।
वेवसाइट ह्याक गर्ने सोच कहाँबाट आयो ?
मलाई मेरो देशको एकदम माया लाग्छ । सुरुमा मैले इन्टरनेटमा बिदेशीहरुले नेपालको ‘साइबर सेक्युरिटी’ निकै कमजोर छ भनेको सुनें । विदेशीले त्यस्तो भन्दा निकै दुःख लाग्थ्यो । मलाई पहिला वेवसाइट ह्याक गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन । विभिन्न वेवसाइटको ‘सेक्युरिटी’ निकै कमजोर छ भन्ने पत्ता लागेपछि मैले वेवसाइटको सेक्युरिटीबारे सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्ट पनि गरें । तर त्यसको जवाफ नआएपछि उनीहरुलाई त्यसको जानकारी दिन ह्याक गरेको हुँ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि ‘बेकार यस्तो गरेछु’ जस्तो लागेन ?
कहिलेकाहीं लाग्थ्यो । तर मैले वेवसाइट ह्याक गरेको आफ्नै देशका वेवसाइटहरु सुरक्षित हुन् भनेर हो । मैले कुनै पनि डाटालाई दुरुपयोग गरेको छैन । विदेशमा वेवसाइटमा भएका यस्ता समस्याहरुबारे रिपोर्ट गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने चलन छ । नेपालमा त त्यो अपराध हुँदोरहेछ ।
तपाईंसम्म प्रहरी कसरी आइपुग्यो भन्ने थाहा छ ?
थाहा छ । मैले नेपाल टेलिकमको साइट ह्याक गर्दा मोबाइल प्रयोग गरेको थिएँ । त्यहिबाट मेरो जानकारी प्रहरीले ‘ट्रेस’ गर्यो ।
म पक्राउ परेपछि नेपाल टेलिकमका केही सरहरु मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । मैले कसरी साइट ह्याक गरें भन्नेबारे पनि सोध्नुभयो । आज पनि म दावाका साथ भन्न सक्छु, नेपाल टेलिकमको ‘सेक्युरिटी’ निकै कमजोर छ । मलाई पो प्रहरीले पक्राउ गर्यो त । कुनै पनि बेला विदेशीले नेपाल टेलिकमका डाटाहरु दुरुपयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल टेलिकमको वेवसाइट कमजोर नै हो त ?
हो । निकै कमजोर छ नेपाल टेलिकमको सेक्युरिटी । यसमा अझैपनि कुनै सुधार आएको छैन । मैले त नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेक्युरिटी बलियो बनाओस् भनेर केही डाटाहरु ह्याक गरी त्यसलाई फेसबुकमा हालेको थिएँ । तर त्यसैलाई आधार बनाएर मलाई पक्राउ गरियो । म पक्राउ परेपछि नेपाल टेलिकमका केही सरहरु मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । मैले कसरी साइट ह्याक गरें भन्नेबारे पनि सोध्नुभयो । आज पनि म दावाका साथ भन्न सक्छु, नेपाल टेलिकमको ‘सेक्युरिटी’ निकै कमजोर छ । मलाई पो प्रहरीले पक्राउ गर्यो त । कुनै पनि बेला विदेशीले नेपाल टेलिकमका डाटाहरु दुरुपयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारका ९० प्रतिशत वेव साइटहरु असुरक्षित छन् । मलाई पक्राउ गरिनु अघि, मेरो अन्तराष्ट्रिय ह्याकरसँग पनि कुराकानी हुन्थ्यो । उनीहरु गुगल डट कम डट एनपी समेत ह्याक हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र उक्त वेव साइटको सर्भरमा आफ्नो पहुँच पुगीसकेको बताउँथे ।
नेपाल सरकारका अन्य कुन कुन साइटमा समस्या छ ?
नेपाल सरकारका ९० प्रतिशत वेव साइटहरु असुरक्षित छन् । मलाई पक्राउ गरिनु अघि, मेरो अन्तराष्ट्रिय ह्याकरसँग पनि कुराकानी हुन्थ्यो । उनीहरु गुगल डट कम डट एनपी समेत ह्याक हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र उक्त वेव साइटमको सर्भरमा आफ्नो पहुँच पुगीसकेको बताउँथे । यो साइट छिट्टैनै ह्याक हुनसक्छ । अब गुगल डटकम डट एनपी नै ह्याक भयो भने हामी नेपालीहरुको के इज्जत रह्यो र अन्तराष्ट्रिय साइबर बजारमा ? हाम्रो देशमा त तिम्रो साइटमा समस्या छ भनेर सचेत गराउँदा अपराधि भइदो रहेछ । अन्य थुप्रै साइटहरुमा समस्या छन् । ५०० बढी सरकारी साइटहरु ह्याक भइसकेका छन् ।
अबचाहीं वेवसाइट ह्याक गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
ह्याकनै भनेर चाहिं गर्दिन होला । तर कुन साइटमा समस्या छ भनेर रिपोर्ट चाहिं गर्छु । मैले बिगतमा पनि त्यहीनै गर्थें । कुनै सरकारी साइटमा समस्या छ भने त्यहाँको इमेलमा रिपोर्ट गर्थ्यें तर कुनै पनि जानकारी आउंदैनथ्यो । विदेशमा रहेका साइटहरुबारे रिपोर्ट गर्यो भने केहि दिनमै प्रतिकृया आउँछ । मेरो उदेश्यनै ‘इथिकल ह्याकर’ बन्ने हो ।
हाम्रो देशको वेव साइट सुरक्षित राख्न पहल गर्नुहोस् । हाम्रो देशका डाटाहरु मजस्ताले ह्याक गर्दा पो दुरुपयोग भएन, विदेशीले ह्याक गर्यो भने देशलाई निकै घाटा हुन्छ । मिल्छ भने म प्रहरीकहाँ हुँदा छुटेको मेरो कक्षा ११ को कम्प्यूटर बिषयको प्राक्टिकल परीक्षा दिने वातावरण बनाईदिए हुन्थ्यो ।
प्रहरी हिरासतबाट छुटिसकेपछि कस्तो लागेको छ ?
करिव २५ दिनको हिरासतको बसाइ पछी घर फर्केको छु । ममाथि लागेका विभिन्न अभियोगबारे बुझ्न बाबा अदालत धाइनै रहनुभएको छ । ३० हजार ढलौटी तिरेर निस्किएँ । खोइ कस्तो लागेको छ भन्नु । तर मैले नगरेपनि हाम्रो देशका साइटहरु विदेशीले ह्याक गर्छन् । हामी आफैं कमजोर छौं के भन्ने ? मलाई त प्रहरीले पक्रियो, ती बिदेशीहरुले नेपालीहरुको डाटा दुरुपयोग गर्यो भयो को जिम्मेवारी हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको वेवसाइट थुप्रै पटक पाकिस्तानी ह्याकरबाट ह्याक भइसकेको छ । अदालत जस्तो संबेदनशील निकायको डाटाहरु बिदेशीको पक्कडमा हुँदा त्यसले देशलाई निकै घाटा हुन्छ । नेपाल टेलिकमको सेक्युरिटी कतिसम्म कमजोर छ भन्ने कुरा बयाननै गर्न सकिन्न । टेलिकममा भएका हाम्रा कुनै पनि डाटा सुरक्षित छैनन् । यी कुराहरु सम्झेर दुख लाग्छ ।
प्लस टु पछि के गर्ने सोच छ ?
आइटी पढ्छु । विदेश जान्छु होला । नेपालको खुब माया लाग्छ । तर यहाँ त कसैको समस्या औंल्याईदिंदा अपराधी बनिँदो रहेछ । विदेशमा त्यहि कुराले स्याबासी पाइन्छ, पुरस्कार पाइन्छ ।
अव तपाईंलाई के सजाय हुन्छ भन्ने थाहा छ ?
ठ्याक्कै चाहिं थाहा छैन । पत्र पत्रिकामा २ बर्ष जेल सजाय हुन्छ भन्ने सुनेको पढेको थिएँ । त्यो चाहिं गलत हो भन्ने सुनेको छु । यदाकदा १८ बर्ष नपुगेकोलाई कम सजाय हुन्छ भन्ने पनि सुनेको छु । मेरो उमेर १८ बर्ष पुगेको छैन । नागरिकता पनि बनाएको छैन । २०५६ साल असार ३१ गते जन्मेको हुँ । जन्मदर्तामा पनि त्यहि मिति छ । तर प्रहरीले १८ बर्ष पुगेको भनेर बाहिर पत्रिकामा दिनुभएको रहेछ । हेरौं के हुन्छ ? अव अदालतले टोकेको सजाय त हुन्छ नै !
सरकारलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
१२३०७ Total Views ३ Views Today
← मनिषाको गाउँले तथा छिमेकी साथिभाइ ,र कलेजका साथीहरुको यस्तो भनाई :
कोरियाको बुसान सहरमा नेपाली आवास गृहको स्थापना गर्न प्रारम्भिक ब्यास्थापन समिती गठन →
पुरस्कारकै लागि कबिता लेख्छ भने त्यस्तो कबिले कबिता लेख्न छोडे हुन्छ ।” …..कवि जीवन खत्री प्रथम पुरस्कार बिजेता
इन्टरनेशनल म्युजिक अवार्ड 2074 बिजेता डि आर अटु सङ्गको विशेष अन्तरबार्ता : अटुको सङ्गित अब हिन्दी गजलमा पनि